Water Point ho solontena tokana Elkay any Polonina no manolotra mpisotro, loharano rano fisotroan-drano fisotroan-drano sy fisotroan-drano fisotroan-drano, ho an'ny sekoly sy oniversite, tranobe birao, foibe fivarotana, zavamaniry famokarana, klioba fanatanjahantena, trano fanatanjahantena, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, toeram-pitsaboana, efitrano fialam-boly, sinema, birao fanjakana, zaridainam-panjakana, kianja filalaovana, promenades, sns.
Aza sivana ny rano. Diovy izy! Izahay dia manolotra ny haitao revolisionera an'ny jiro LED UV amin'ny famonoana rano avy amin'ny Acuva. Izahay no mpizara voalohany manokana any Eropa!
Mpisotro zava-kendrena roa - maodely LZS8WSS2K
Green Tricker - Mampiseho ny isan'ireo tavoahangy plastika voatahiry.
Mpanara-maso ny sivana (modely misy sivana ihany) - Ny jiro maitso, mavo ary mena dia manondro ny toetran'ny sivana.
Stream Laminar - Bokotra famenoana mihidy - miantoka ny fikorianan'ny malama sy ny fiparitahan'ny kely indrindra
Tontosa mora azo - Miaro amin'ny ratra ataon'ny mpampiasa ny Flexi-Guard. Izy io dia manana fonosana miaro amin'ny fitomboan'ny zavamiaina bitika.
Fanamafisana sensor elektronika - Fampandehanana tsy mifandray sy ara-pahadiovana miaraka amin'ny famonoana mandeha ho azy aorian'ny 20 segondra tsy niasana.
Rehefa ampiasaina any amin'ny andrim-pianarana dia azo ampiarahana amin'ny spout Easy-Flex manokana, mahomby, malefaka miaro ny ankizy amin'ny ratra. Ny mpizara ho famenoana tavoahangy dia nateraky ny sensor iray ho azy.
Mpisotro - modely EZS8S
Rehefa ampiasaina any amin'ny andrim-pianarana dia azo ampiarahana amin'ny spout Easy-Flex manokana, mahomby, malefaka miaro ny ankizy amin'ny ratra.
Mpisotro - apetraka LZSTL8WSS2K
Mpisotro - maodely mahatohitra fanimbana
Mpisotro ivelany - agregate voajanahary